Chọpụta Templelọ Luxor na Egypt | Akụkọ Njem
Kwado njem ị ga-aga Ijipt bụ nrọ nye ọtụtụ ndị na enweghị mgbagha ọ bụ ebe anyị nwere ike ịhụ ebe bụ akụkụ nke akụkọ ntolite nke mmadụ. Ọchịchị ndị Ijipt nke ọtụtụ narị afọ gara aga guzobere obodo na ihe ncheta ndị dị egwu hapụrụ ọtụtụ ihe ndị taa na-abụ ebe ndị njem nleta na-amasị onye ọ bụla, dịka ,lọ Nsọ Luxor a ma ama na Egypt.
Ka anyị gaa ịhụ ya akụkọ banyere Templelọ Nsọ Luxor a nakwa ihe anyị ga-achọta mgbe anyị gara ileta ya. O doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa n'Ijipt bara uru ịga na obodo Luxor na ọ dị nso n'ụlọ nsọ nke Karnak.
1 Ihe Ochie ochie
2 Lọ Luxor
3 Akụkụ nke ụlọ nsọ ahụ
Ihe Ochie ochie
Templelọ nsọ a dị n'ime ihe bụ Thebes oge ochie, otu n'ime obodo kachasị mkpa nke Egypt Ancient nke bụkwa isi obodo ya n'oge Middle Kingdom na New Kingdom. Ọ bụ n'ime obodo ugbu a Luxor na anyị ka nwere ike ịhụ akụkụ ndị dị mkpa dịka Lọ Luxor na oflọ Nsọ nke Karnak ekwusara na ya kilomita abụọ nke anya site n'okporo ụzọ na sphinxes na fọrọ nke nta ka kpamkpam okụrede. Ewubere ya site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke Naịl nwere necropolis na nke ikpeazụ. Aha ndi Egypt ya bu Uaset mana ndi Greek kpọrọ ya Thebes. Lọ nsọ Luxor a bụ ihe dị mkpa n'obodo mepere emepe nke okpukpe na Thebes, nke e doro chi Amọn.
Este E wuru temple ahụ na usoro ndị eze XNUMX na XNUMX na narị afọ nke 1400 na 1000. BC, ọ bụ ndị fero bụ Amenhotep III na Ramses nke Abụọ mepụtara ụlọ nsọ a, bụ nke akụkụ ndị kasị ochie na-echekwa n'agbanyeghị na emesịa agbakwunyere mpaghara ndị ọzọ. Akụkụ nke usoro ndị eze Ptolemaic ka etinyere n'ụlọ nsọ a ma n'oge Alaeze Ukwu Rom, eji ya dị ka ogige ndị agha. Thislọ a bụ otu n'ime ụlọ nchekwa kacha mma nke alaeze Ọchịchị Ọhụrụ nke Egypt ma nwee ọtụtụ akụkụ nke merela agadi na nke na-egosi anyị ihe ọtụtụ ụdị okpukperechi nke oge ahụ dị.
Akụkụ nke ụlọ nsọ ahụ
N'ihu anyị ka nwere ike ịhụ ụzọ nke sphinxes jikọtara ya na oflọ Nsọ nke Karnak nke nwere ihe dịka narị sphinx narị isii dị ole na ole n’ime ya. Na nso uzo a bu uka nke Serapis nke a na-ekwu na ndi Ptolemies, ebe ebe a bu ebe a na-efe ofufe kemgbe otutu oge. Anyị nwere ike ịhụ nnukwu pylon nke Ramses II wuru. Pylon a sitere n'okwu Grik nke pụtara nnukwu ọnụ ụzọ ma anyị na-ezo aka n'ọnụ ụzọ ahụ na mgbidi abụọ nke dị ka pyramid ndị a gbanwere na nke ahụ bụ nnukwu mgbidi mbata. Pylon nke Ramses nke Abụọ kọọrọ agha nke Qadesh ebe Fero chere ihu na ndị Het. Emi edidi inuaotop temple. N'ihu pylon a ka a ga-enwe obelisk abụọ nke naanị otu foduru n'ihi na onye nke ọzọ dị na Ebe de la Concorde na Paris. Na ọnụ ụzọ ahụ, ihe oyiyi abụọ nke Ramses II na Queen Nefertari na-anọchite anya n'akụkụ abụọ nke ocheeze ahụ.
Mgbe ah anyị banyere ogige ahụ peristyle, ogige mbụ nke ụlọ nsọ ahụ. Ogige a ogologo mita 55 nwere ogidi papyrus 74 na ahịrị abụọ na n'etiti e nwere ebe nsọ nwere ụlọ ụka atọ raara nye Amun, Mut na Khonsu. Chalọ arụsị ndị a jere ozi dị ka ụlọ nkwakọba ihe maka ụgbọ mmiri ndị ahụ dị nsọ. N'ogige a, anyị nwekwara ike ịhụ ederede dị iche iche na mmemme okpukpe ma ọ bụ ụmụ nke Fero. Anyị na-aga n'ọnụ ụlọ nke na-esote ebe anyị na-ahụ patọn nke Amenhotep III nwere ogidi iri na anọ n'ahịrị abụọ.
El Ogige Peristyle nke Amenhotep III bụ ime ụlọ na-esote. N'akụkụ atọ nke akụkụ anyị nwere ike ịhụ ahịrị abụọ nke papyrus kọlụm. A na-enweta steepụ patio site na steepụ ma ebe a na-eduga na ụlọ hypostyle nke ga-abụ ọnụ ụlọ mbụ n'ime ime ụlọ nsọ ahụ. Ime ụlọ a nwere ogidi iri atọ na abụọ wee mechie ya na ụdị mbụ ya. Site na ụlọ hypostyle a ị nwere ike ịnweta ụlọ enyemaka ndị ọzọ dị ka Mut, Jonsu ma ọ bụ Amun Hall na ebe nsọ ndị Rom. N'ime ụlọ ọmụmụ, anyị nwere ike ịhụ ogidi atọ etubere ugo site na ihe ntụsara ahụ na-ekwupụta ọmụmụ nke Amenhotep III. Anyị nwere ike ịga n'ihu n'otu ọnụ ụlọ nke rụrụ ọrụ dị ka ihe owuwu ụlọ na n'ikpeazụ gaa ebe nsọ nke Amenhotep III nke nwere ihe ngosi nke pharaoh. Mpaghara Amenhotep bụ ihe akọwapụtara dị ka ime ụlọ nsọ ahụ, nke Ramses II nke mbụ rụrụ na mbụ ma mesịa mpụta ya. Njem ahụ ga-eme ka anyị gabiga ụlọ niile ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ nkọwa niile nke ihe osise na nnukwu ogidi ndị nwere papyrus nke anyị ga-ahụ n'ọtụtụ ụlọ nsọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Temple nke Luxor na Egypt